Ngaphandle kwamanzi ukuqhuba imisebenzi ebalulekile kunzima kakhulu kunoma iyiphi indawo yezwe. Ngokuhamba kwesikhathi kufanele bayamba kahle, nakuba le nqubo kungase kubonakale okungaphezu kwemvelo. Empeleni, ungakwenza kwayona. Uma senza kahle ngokugcwele, khona-ke udinga alungele Eqinisweni ukuthi kuzothatha isikhathi esiningi, imali eningi ukuba etshaliwe. Endabeni le kahle bazokwazi ukugwema neziningi zezinkinga. Yiqiniso, indima enkulu udlalwa uhlobo kwenhlabathi namanzi nesenzakalo ukujula. Okunye izimo sina ukuthi ezingaba nomthelela emphumeleni, is hhayi waphawula.
Ngakho, indlela bayamba kahle kusayithi lakho? Okokuqala nokusemqoka, kumelwe kutholakale izinga okuvela kuyo amanzi. Ungenza lokhu ngezindlela ezimbili eziyinhloko. Esimweni sokuqala wafunda amabalazwe Geological ongakusho ezijulile kangakanani aquifers. amafemu Akhethekile uthole ulwazi lwabo ngenxa yabo. Nokho, ungase futhi ucele omakhelwane nge kahle, ibanga ukuya emanzini. Gubha kahle ngaphandle ukubandakanywa ochwepheshe kungenzeka, uma okungenani abe nomqondo olunzima ubuchwepheshe.
Kahle kungase kutholakale indlela Drilling usebenzisa izipikili. Indawo lapho umsebenzi oyokwenziwa, kumele angabekwa. Khona-ke ungenza inkatho Umhlahlandlela ngokususa phansi cishe amabili abakuthola insabule. Eminye imishini wenziwa uqobo. Ekuqaleni, nge ukujikeleza sokuprakthiza Ungasingatha oyedwa, kodwa ekuqhubekeleni phambili kwezindaba ngaphakathi umhlaba udinga usizo kothile. Borehole yamba kuyoba lula kakhulu uma ngezikhathi uthele amanzi emgodini. Ngemva ukwenza ematfuba ambalwa insimbi uyazithulela usule ngokuphelele emhlabathini.
Lapho isibambo sokuprakthiza is sehliselwe endaweni esiphezulu, indololwane letengetiwe. Nokho, umsebenzi ukhululekile kudingeka ezinye isinyathelo emgqonyeni noma ibhokisi. Ngemva ukunwebeka kwemisila isibambo uyaqhubeka kuze engena phakathi le yamanzi. Ukuze ushone ekugxileni ukuphela, udinga eziningi umzamo. Metal ipayipi kufanele kwehlisa ngokushesha, Nokho kufanele uzilungiselele kusenesikhathi. Ngenxa yale njongo ayisithupha milimitha sokuprakthiza wazalela izimbobo ukuhlinzeka amanzi ukugeleza kwamanzi ngaphakathi ipayipi.
I ukugcwala kwamanzi, ngokuvamile futha centrifugal nge umthamo eliphezulu. Wayengasabi medium obukhulu, lokukhulunywa ngako kulendzaba kubaluleke kakhulu. Ngenxa inqubo kunalokho eside unyakazisa efiselekayo banakekele iziteshi amanzi. Inzuzo enkulu self-imishini ukuthi endaweni akadingi ukusebenzisa okukhulu umshini imishini. Ngakho, engadini green izindawo kwakungafanele asengozini. Ngaphezu kwalokho, le ndlela iyona ethembisayo ngokuya kokuqina kanye jika. Namanje ewusizo ukwazi indlela bayamba umgodi yena.